Arsenal Oo Emarites Stadium Ku Garaacday Man United, Arsene Wenger Oo Ugu Danbayn Mourinho Kaga Guulaystay Kulan Premier Leaque-ga Ah Iyo Gunners Oo Soo Noolaysay Rajadii Kaalinta Afraad Ay Ka Qabtay. | Sports | Shacabka Media
Arsenal Oo Emarites Stadium Ku Garaacday Man United, Arsene Wenger Oo Ugu Danbayn Mourinho Kaga Guulaystay Kulan Premier Leaque-ga Ah Iyo Gunners Oo Soo Noolaysay Rajadii Kaalinta Afraad Ay Ka Qabtay.
Arsenal ayaa guul xili ciyaareedkeeda muhiim u ah Emirates Stadium kaga gaadhay kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Manchester United. Arsene Wenger ayaa ugu danbayn kulan horyaalka Premier leaque-ga ah ku garaacay cadowgiisa kowaad ee Jose Mourinho oo muddo dheer dhakada ka soo garaacayay.
Waxaa guushan Arsenal ku hogaamiyay Granit Xhaka iyo Danny Welbeck oo muddo saddex daqiiqo gudaheed ah laba gool ugu dhaliyay Arsenal. Kooxda Arsene Wenger ayaa soo noolaysay rajadii ay ka qabtay in ay kalainta afraad ku dhamaysato oo ay Champions leaque-ga u soo baxdo inkasta oo ay wali ku xidhnaan doonto haddii ay Manchester City iyo Liverpool dhibco lumin doonaan.
Arsene Wenger ayaa markii 13 aad ee ay Mourinho iskaga horyimaadeen kulan Premier leaque-ga ah ka guulaystay isaga oo hore 12 kulan uga soo helay shan guuldaro iyo 7 kulan oo ay barbaro soo galeen. Laakiin hadda guuldaro la’aantii uu Mouirnho ka haystay Wenger ayaa soo dhamaatay.
Kaydka:David Ospina, Gabriel, Hector Bellerin, Francis Coquelin, Alex Iwobi, Theo Walcott, Olivier Giroud.
Kaydka:: Sergio Romero, Eric Bailly, Daley Blind, Paul Pogba, Jesse Lingard, Scott McTominay, Marcus Rashford.
Arsenal iyo Manchester United ayaa kulankan ciyaarayay iyaga oo sii ogaa in Liverpool ay u kuftay oo ay dhaafi kari wayday Southampton waxayna Gunners u arkaysay in guul ay ka gaadho Manchester United ay dib u sixi karto xili ciyaareedkii ka qaldamay. Laakiin Man United ayuuba kulankani xiiso gaar ah u lahaa iyada oo ogayd in guul ay Arsenal ka gaadhaa ay laba dhibcood ugu soo jirsan karto Liverpool iyada oo waliba uu kulan baaqi u yahay.
Kulankan qaybtiisii hore ayaa ahayd mid xamaasad badan isla markaana aan laga fahmi karin in Arsenal iyo Manchester United ay kulankan ciyaarayeen iyaga oo ka baxsan kaalinta afraad muddo 40 sano ah kadib dhamaadka xili ciyaareedka. Waxa uu u muuqday sidii uu yahay kulan final ah waxayna labada goolhaye qabteen shaqo fiican qaybtii hore ee kulankan.
Arsenal ayaa ahayd kooxda inta ugu badan kubbada haysatay isla markaana qaab ciyaareedka ugu fiican soo bandhigtay iyada oo Manchester United inta badan qaybtii hore ku qasabtay in ay si adag u difaacato oo ay dib ugu soo degto qaybta ay garoonka ka joogtay.
DAQIIQADII 6 Manchester United ayaa heshay fursadii ugu horaysay ee ugu halista badnayd kadib markii ay Rooney iyo Mkhitaryan shaqo fiican soo qabteen laakiin xidiga loo xilsaaray in uu fursadan gool ku dhaliyo ee Martial ayaa arkay darbadiisa oo uu goolhaye Petr Cech ka beeniyay.
DAQIIQADII 9 AAD Arsenal ayay ahayd in ay hogaanka ciayarta la wareeegto laakiin taas waxaa diiday goolhaye David De Gea oo fursad layaableh ka beeniyay Aaron Ramsey kaas oo kubbad cajiib ah ka helay Alexis Sanchez wuxuuna xidiga ree Wales markiisa arkay De Gea oo kubbada dhinaca midig u dhaafiyay goolkiisa ay gali lahayd.
Intaa wixii ka danbeeyay waxay Arsenal noqotay kooxda sida buuxda ula wareegtay gacan ku haynta ciyaarta laakiin waxa ugu wayn ee ka maqnaa ayaa ahaa qaabkii ay ku dhaafi lahayd tatikada uu Mourinho ciyaarta u soo dhigay oo waliba difaacasho xoogani ay ku jirtay. Rooney iyo Herrera ayaa si adag difaaca United uga caawinayay in ay cadaadiska la tacaalaan.
DAQIIQADII 32 AAD Markiisa Wayne Rooney ayay hayad in uu dhaliyo goolka furitaanka Manchester United kadib markii ay Holding, Cech iyo Koscielny ay kabtanka United u ogolaadeen in uu helo fursad gool dhalineed laakiin ugu danbayn dadaalka Rooney ayaa ku dhmaaaday gacamaha Petr Cech.
Marka laga yimaado kubbad haynta, fursad abuurista, booshishanka oo ay Arsenal qaybtii hore gacanta sare ku lahayd waxay labada kooxood sameeyeen min laba darbo oo goolka lagu toogtay oo ay badbadiyeen De Gea iyo Petr Cech. Waxaana qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Arsenal soo laabtay iyada oo dhaarsan isla markaana ogayd in waxaan guul ka ahayni ay xili ciyaareedkeeda ka dhigayso mid haddaba dhaamaaday. Waxayna kooxda Arsene Wenger bilawday in ay fuliso hawlgalkii ugu waynaa si ay difaaca United u dhaafto.
DAQIIQADII 54 aad Arsenal ayaa ugu danbayn abaal marin ka heshay dadaalkii waynaa ee ay soo samaysay waxaana goolka furitaanka u saxiixay Granit Xhaka kaas oo darbo qurux badan ka tuuray meel goolka Man United u jirtay 30 yards laakiin darbadiisa ayaa ku sii dhacday Herrera taas oo De Gea u diiday in uu sameeyo wax gool badbaadin ah waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Gunners hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Alex Oxlade-Chamberlain oo kulankan qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigayay isla markaana muujiyay tayadiisa ayaa caawinta goolkan sameeyay waxayna Manchester United markan si dhab ah u dareentay cadaadiskii waynaa ee ay markii horeba kala kulmaysay Gunners.
DAQIIQADII 53 AAD Arsenal ayaa markiiba heshay goolkeeda labaad ee ay xaalada ugu sii xumaysay Manchester United waxaana markale kooxdiisii hore ee Red Devils ugaadhsaday Danny Welbeck kaas oo si fiican uga faa’iidaystay kubbad uu markale caawinteeda sameeyay Alex Oxlade-Chamberlain laakiin Welbeck ayaa kubbada madaxa kaga dhex darbeeyay Smallaing iyo da’yarka Tuanzebe si uu saddex daqiiqo gudahood Gunners ugu keeno goolkeeda labaad waxayna ciyaartu noqotay 2:0 ay kooxda Wenger si deg deg ah hogaanka ugu dheeraysatay.
Danny Welbeck ayaa goolkiisii saddexaad ka dhaliyay Manchester United waana goolal ka badan labadii gool ee uu Arsenal ka dhaliyay waqtigii uu maaliyada Man United soo xidhnaa. Goolka laabad ee uu Danny Welbeck ku gaadhsaday kooxdiisii hore ee Red Devils ayaa boos fiican oo ay ciyaarta ku maamuli
DAQIIQADII 61 aad Mourinho ayaa shaxdiisa laba isbadal ku sameeyay wuxuuna ciyaarta ka saaray Henrikh Mkhitaryan iyo Ander Herrera wuxuuna kaydka uga yeedhay Marcus Rashford iyo Jesse Lingard si ay u raadinayaan qaabkii ay Man United ciyaarta ugu soo laaban lahayd.
DAQIIQADII 74 AAD Wayne Rooney ayaa darbo qurux badan ku tuuray dhinaca goolka Arsenal iyada waliba Petr Cech uu u muuqday mid daawan lahaa kubbada oo goolkiisa galaysa balse Rooney ayaa arkay darbadiisa soo wareegaysay oo bartilmaameedkeeda seegtay.
DAQIIQADII Granit Xhaka oo ahaa xidigii Gunners culayska goolka furitaanka kaga dulqaaday ayaa u muuqday mid uu ku soo kacay dhaawacii kulanki Tottenham ku soo gaadhay waxaana lagu soo badalay Francis Coquelin. Manchester United ayaa markan culayska soo saartay Gunners si ay ciyaarta wali goolal uga sii raadiso.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:0 ay Arsenal ku garaacday Manchester United waana guul taariikh u ah tabaabre Arsene Wenger oo markii ugu horaysay Mourinho ku garaacay kulan horyaalka Premier Leaque-ga ah. Laakiin sidoo kale Mourinho iyo kooxdiisa Red Devils ayaa rekoodhkii guuldaro la’aanta ee 25 kulan u wayday kooxda ay sida wayn u xifitalaan ee Arsenal.
Guushan ayaa Arsenal ka caawisay in ay laba dhibcood u soo jirsato Manchester United iyada oo waliba Gunners gacanta ku haysta kulan baaqi ah. Man United ayaa iska lumisay fursad wayn oo ay sarre ugu qaadi lahayd in ay afarta sarre ku dhamaysto. Man United ayaa 35 kulan ka heshay 65 dhibcood halka Arsenal ay 34 kulan ka heshay 63 dhibcood.
Inkasta oo ay guushani soo noolaysay rajadii sii muuqbeelaysay ee ay Arsenal ka lahayd kaalinta afraad ayayna haddana wali gacmaheeda wax ku jirin waxayna u baahan tahay in Manchester City iyo Liverpool dhibco lumiyaan. Laakiin haddii ay Arsenal guulaysato kulanka baaqiga u ah waxay kaalinta shanaad kala bixi doontaa Man United
« Previous StoryDaawo:Kama qeyb-galayno shirka London:M/weynaha Hirshabeele:Qalinkii:Isbaaradda Maanta
Next Story »Bye Bye Cunsuriyad Le Pen:Macron oo loo doortay M/weynaha Faransiiska